Ndi ahia gi ma ihe omuma ihe anọ ndia? | Martech Zone
Thursday, May 24, 2007 Satọde, Ọgọstụ 4, 2007 Douglas Karr
Ezutere m onye ndu obodo dị ịtụnanya n'oge na-adịghị anya. Mmasị ya maka ụlọ ọrụ ya na maka ohere ọ kpatara na-efe efe. Anyị kwuru banyere ihe ịma aka nke ụlọ ọrụ ọrụ ebe ụlọ ọrụ ya na-egosipụta akara ya.
Ọ bụ ụlọ ọrụ siri ike. Amawaputara mmefu ego na oru a nwere ike iche na mgbe ufodu enweghi ike imeri ya. Ka anyị na-atụle ihe ịma aka na azịza ya, echere m na ọ gbadara ụzọ dị mkpa 4.
Dabere na azụmahịa gị, usoro metụtara usoro ndị a ga-agbanwe. Ikwesiri inwe metrik metụtara nke ọ bụla. Nweghị ike imeziwanye ihe ị na-enweghị ike ịlele!
1. Afọ ojuju
Afọ ojuju bụ ihe na-edebanye aha abụọ maka ụlọ ọrụ gị. Anyị nwere ike ịnụrịrị 'whew' mgbe onye ahịa na-enweghị afọ ojuju kwụsịrị na anyị. Mana ihe anyị na-elegharakarị bụ na ha na-agwakwa ọkara ndị ọzọ na-enweghị afọ ojuju. Yabụ… ị ​​tufughi onye ahịa, ị tụfuru atụmanya ndị ọzọ. Echefula na ndị ahịa (na ndị ọrụ) ndị kwụsịrị n'ihi na ha enweghị afọ ojuju na-agwa ndị ọzọ!
Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ na-arụrụ ha ọrụ anaghị ege ntị, ha ga-aga gwa onye ọ bụla ọzọ ha maara. Okwu ọnụ abụghị ihe a na-ekwu maka ya zuru oke, mana ọ nwere ike ịnwe nnukwu mmetụta na azụmaahịa - nke ziri ezi na nke na-adịghị mma. Ngwaọrụ dịka ntanetị na-eme ka afọ ojuju.
Gbaa mbọ hụ na ị na - enyocha ogo nke ndị ahịa gị yana na ha nwere afọ ojuju karịa. Email dị mfe, oku ekwentị, nyocha, wdg nwere ike ime oke ugwu. Ọ bụrụ na ha enweghị ohere ime mkpesa megide gị - ha ga-eme mkpesa nye onye ọzọ!
Ndị ahịa nwere afọ ojuju na-etinyekwu ego ma na-achọtakwu ndị ahịa maka gị.
Njide bụ ikike ụlọ ọrụ gị iji mee ka ndị ahịa zụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Maka weebụsaịtị, njigide bụ pasent nke ndị ọbịa pụrụ iche na-alaghachi. Maka akwụkwọ akụkọ, njigide bụ pasent nke ezinụlọ na-emegharị ndebanye aha ha. Maka ngwaahịa, njide bụ pasent nke ndị zụrụ ihe na-azụta ngwaahịa gị ọzọ ka nke mbụ gasịrị.
Nnweta bụ atụmatụ nke na-adọta ndị ahịa ọhụrụ ma ọ bụ ọwa nkesa ọhụrụ iji ree ngwaahịa gị. Mgbasa ozi, Marketingzụ ahịa, Ntugharị na Okwu Ọnụ bụcha atụmatụ niile ị kwesịrị ị na-akwụ ụgwọ, tụọ, ma kwụghachi ụgwọ.
Echefula… inweta ndị ahịa ọhụrụ dị oke ọnụ karịa ịchekwa ndị nke ugbu a. Chọta onye ahịa ọhụụ iji dochie onye hapụrụ abụghị azụmaahịa gị! Naanị ya na-eweghachite ya na par. You maara ego ole ọ na-ewe iji nweta onye ahịa ọhụụ?
N’ezie, uru ị ga-erite bụ ego ole fọdụchara n’ego gị niile. Ọ bụrụ na ị nweghị uru, ị gaghị azụ ahịa ogologo oge. Onu ogugu uru bu oke uru nke uru bu otutu ndi mmadu na etinye ezigbo uche na nke a ma mgbe ufodu ha nwere mmejọ. Dịka ọmụmaatụ, Wal-mart nwere oke oke uru ma ha bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị baa uru (na nha) na mba ahụ.
Ewezuga ndị a niile, n'ezie, bụ gọọmentị.
Carolina Omume Planning
Mee 24, 2007 na 9: 08 PM
Magburu onwe ya post! Hụrụ echiche gị n'anya, karịsịa na ọrụ ndị ahịa. Daalụ.
Mee 25, 2007 na 2: 05 PM
Naanị ihe na-eme ka ụlọ ahịa, ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ ma ọ bụ nzukọ dị iche n'okporo ámá dị iche iche bụ ọrụ anyị. Ọ bụ ihe nwute, ọtụtụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ada karịa ị nweta atụmanya ndị ọzọ, ma ya fọdụkwa imebiga ihe ókè. Nnukwu ọkwa ma bụrụ ihe ncheta mgbe niile nye ụlọ ọrụ ọ bụla na-eche banyere ọrụ.
Mee 25, 2007 na 5: 12 PM
Akwa post na-anwa ịchekwa ya na ụtọ delicious mana ọ ga - ede akara ya… !! Ọhụụ dị ukwuu!
Mee 28, 2007 na 11: 44 AM
LOL! Enwere m mmasị na ndị gọọmentị na-ekwu na njedebe nke post a! Ọ bụ eziokwu. Ọ baghị uru na pati na-eme ngosi a, ndị mmadụ enweghị afọ ojuju maka ọgbakọ omebe iwu, enweghị afọ ojuju na onye isi ala, yana ọtụtụ gọọmentị mpaghara na mpaghara ha.
Ma ịmara gịnị ??? Gọọmentị na-ahụ maka ihe dị ka ọnwa 6 nke oge onye nnọchi anya nke ọ bụla - N'oge nhoputa ndi ozo!